‘अब सिमानामा सेना पठाएर भारतलाई जवाफ दिनुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ छिट्टै सेना पठाउँ’ - डा. झा -
‘अब सिमानामा सेना पठाएर भारतलाई जवाफ दिनुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ छिट्टै सेना पठाउँ’ – डा. झा
प्रकाशित मिति : २०७७, १३ श्रावण मंगलवार
काठमाडौं। नेपाल मेडिकल एसोशियसनका पूर्व अध्यक्ष डा अञ्जनि कुमार झा उनी स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्र मात्र होइनन् । उनले राजनीतिक विषयमा पनि उत्तिकै चासो राख्छन् । उनले नेपाली भूमी अति’क्रमण नरोकिएका कारण नेपाली सेनालाई तत्काल सिमानामा खटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले सेनालाई सिमानामा तत्काल खटाएर मात्र भारतसंग वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं । उनले मधेसी नागरिकले अहिले सम्म नेपाली सिमा सुरक्षा गर्दै आएको भएपनि नागरिकका बलमा मात्र सिमा सुरक्षा नहुने बताएका छन् । सिमाना रक्षा गर्दै आएका मधेसी समुदायलाई नै भारत परस्त भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले सेनालाई सिमानामा पठाए त्यसका पछि पछि मधेसी समुदाय सहयोगका लागि जाने उनको भनाई छ।
उनले सेना सिमानामा पठाउने निर्णय गरे सेनाको पछाडी आफुपनि सिमा रक्षाका लागि जाने बताए । नेपालको सिमा अति’क्रमण हुँदा नेपाली सेनालाई किन प्रयोग गरिदैन उनले भने, तत्काल सिमानामा सेना पठाएर नेपालको उपस्थिती जनाउनपर्छ । उनले सेना पठाउँदैमा भारतसंग यु द्ध नहुने तर्क राखेका छन् । सेना सिमानामा पठाउने भनेको यु द्ध गर्न होइन, आफ्नो उपस्थिती देखाउन हो।
उनीकोरोनाको समयमा अहिले सबैभन्दा अगाडी रहेर काम गर्ने ब्यक्ति नै स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्र चासो राख्दैनन् । कोरोनाकै कहरका बीच नेपाल भारत सिमाको विषय पनि चर्को रुपमा उठेको छ । नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेर भारतले वाटो निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरेको छ।
नेपाली भूमी अतिक्रमित भएको र त्यसका लागि वार्तामा बस्न भन्दै नेपालले गरेको आग्रह गर्दै आएको भारतले एकतर्फी रुपमा वाटो बनाएर उद्घाटन पनि गरेको हो । भारतले वार्ता अस्वीकार गर्दै नेपाली भूमी अति’क्रमण गर्दै गएपछि नेपालले पनि अतिक्रमित भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर निशान छापमा पनि राखिसकेको छ । भारतको छिमेकी मुलुक कसैसंग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । सँधै हेपाहा प्रवृत्ती देखाउने भारतलाई सिमानामा सेना खटाएर जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
भिडियो यहाँ हेर्नुहोस